Kiyyoo Abiy Ahmad keessa lixe! – Kichuu
Kiyyoo Abiy Ahmad keessa lixe!
Kiyyoo AbiyAhmad keessa lixe!
Yeroo kanatti wal shakkiin Bilxiginnaa keessatti guddatee jira.
Abiyyi Ahimeed jara Amaaraa sodaachuu irraa kan ka’e gaafa bakka tokkotti imalu jaruma fudhaatee deema ykn bakka biraatti isaan erga. Erga waraanni Tigraay jalqabamee as walshakkiin jaraa daraan babalachuu irraa kan ka’e muddamni jara gidduu jiru hamaachaa dhufeera.
Jarri amalaa fi hojii namtichaa waan itti baraniif baay’ee of eegachaa jiru. Hayyootaa fi namoonni Siyaasaa jaraas Abiyyi irraa of eeggachuun hojii duraa akka ta’e aangawoota isaaniitif jabeessanii hubachiisaa jiru. Akkaataa namtichi rakkina gareewwan Ambaachoo Mokonnoonii fi Asaaminoo Xiggee gidduu ture babal’isuu fi odeeffannoo sobaa gidduu deddeebisuun wal ficisiise waan beekaniif ejjennoo jabaatanii irraa of eeguu wal hubachiisuu qabatanii socho’aa jiru.
Jarri waraanaa marsaa duraa 20,000 ta’u hooggansa J.Tafarraa Mammoo nama Abiyyi Ahimeedin argaa jibbuun leenjisachuu irrattis muddamanii jiru. J.Tafarraan gidduu waraana Tigraay sanatti hoogganaa Waraana Humna Addaa Amhaaraa ta’uun nama muudamee dha.
Abiyyi Ahimeed gidduu waraana Tigraay sanatti guutummaa guutuutti harka jaraa keessa waan of-seensiseef akkatti keessaa bahu dhabuun Isaayyaasiin nagargaari jechaa akka jiru dubatamus, afuura fudhachuuf jecha ABO fi TPLF karaa Paarlaamaan Shororkeessaa isiniif godha jechuun akka sosobachaa jirus maddeen odeeffannoo keenyaa ni ibsu.
Naannoo Somaaleetti kaleessa irraa eegalee Ummaatni daandii cufuun qabsoo finiinsuun RIB Naannoo Somaalee akka hin seenne ugguruun qabsoo finiinsa jiraachu mirkaneessineerra!
~ Naannoo Somaalee irraa!